माछाले स्तन छोप्ने शुभेच्छा भन्छिन : 'केही एक्स्ट्रा गरम न त भनेर यस्तो गरेका हौ ।' – Namaste Filmy
झण्डै ३० वटाजति नेपाली फिल्ममा अभिनय गरिसके पनि खासै स्थापित हुन नसकेकी नायिका शुभेच्छा थापा पछिल्लो समय फिल्म निर्माण मा होमिएका छन । उनले निर्माण गरेको चलचित्र मिस नेपाल अगामी फाल्गुन १६ बाट रिलिज हुने पक्का छ । केहि दिनअघि फिल्मको प्रोमोशन भन्दै स्तन माछाले छोपेर नाङगो फोटोसुट गराएपछि एकाएक चर्चामा आएको शुभेच्छाको नाङगो शरिर हेरेर धेरैले जिब्रो टोके । करिब ६ दर्जन म्युजिक भिडियोसंगै कयौ टेलिसिरीयलमा पनि अभिनय गरिकेका यी हट हिरोइनले भर्खरै मात्र टाइगर द रियल हिरोको सुटिङ सकाएकी छिन । हाल मिस नेपालकै प्रचारमा ब्यस्त शुभेच्छा थापासंग ज्ञानेन्द्र तामाङले गरेको कुराकानी :
शुभेच्छा जी यहालाई स्वागत छ ।
हजुर हजुर धन्यवाद यहांलाई ।
तपाईको फिल्म रिलिजको लागी रेडि छ । अब केहि समय अगाडी तपाईले फोटोसुट गर्नुभो र त्यसमा तपाईको संवेदनशील अंगलाई माछाले छोप्नुभो किन यस्तो गर्नभाको ?
हजुर मिस नेपालको फोटोसुट गर्दा यो डिफरेन्ट फोटोसुट किन नगर्ने भनेर गरीयो अब हलिउड बलिउडमा पनि यस्तो नभाको हैन । कलाकारको एक्स्ट्रा एक्टीभिटिमा पर्छ यो कुरा ।
एउटा नग्न शरिरमा माछा राख्न आवश्यक थियो र ? मिस नेपालको कथा नै यस्तै हो र ?
हैन, यो मिसनेपालको फोटो सुट हो । तर फोटोसुट चाहि मिस नेपालको लागी होइन । अब एक्स्ट्रा डिजाइन केहि गरम न त भनेर यो गरिएको हो ।
अब यो फोटोसुटबाट धेरै टिप्पणी भयो तपाईको । शुभेच्छाले फिल्ममा अश्लीलता भितर्यायो भन्नेहरु पनि धेरै भेटिए नि के भन्नुहुन्छ तपाई यस बारेमा ?
म के भन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो प्रत्येक नेपाली फिल्ममा यस्तो हुन्छ । म सानो छदा देखि नै नाइटो देखिने लुगा लगाएर पानीमा नुहाइदिएको सीनहरु धेरै फिल्ममा हेरेको छु । त्यो पनि त टप लेस हो । ठुलो कुरा नै छैन । यो सबैले गरिराकै कुरा हो, अलिकति नयां पोज भएकोले बाफ रे के हो यस्तो बिचित्र भन्ने मात्र लाको होला । तर मैले यस्तो बिकृति भित्र्याउन खोजेको हैन । सबैले गरेको कुरा लाई फरक तरिकाले राम्रो हुन्छ कि भनेर गरेको हो ।
हजुर अब फिल्मको कुरा गरौ कस्तो बनेको छ फिल्म मिस नेपाल ?
यो टाइटलबाट नै थाहा हुन्छ । यो नारीप्रधान चलचित्र हो । एउटा कुरा के भने मिस नेपाल कसलाई भन्ने त के क्याटवाक गरेर याम्पमा हिन्ने र ठुला ठुला हिल शुज लाएर विकनीमा फोटो खिच्ने मात्रै मिस नेपाल हो त ? अशली काम गरेर देखाउने, समाजमा राम्रो काम गर्ने मिस नेपाल हुदैन र ? यो बिषय उठाको छु मैले ।
शुभेच्छा थापाले अरुको फिल्म नपाएर आफै फिल्म बनाएको भन्ने सुनिन्छ । के यो नै सत्य हो ?
मैले कयौ चलचित्र खेलिसकेको छु । ती फिल्मका नामहरु कसरी लिऊ कि जसले मलाई प्रोमोशन नै गरेन । अहिले पनि धेरै साथीहरु भेटेको छु, जसले भन्नुहुन्छ फिल्मको हिरोइनभन्दा तपाईलाई प्रोमोशन किन गरेन ? तपाईको रोल धेरै राम्रो लाग्यो ।
किन गर्दैनन तपाईलाई प्रोमोशन ?
के देखेर गरेन किन गरेन त्यो मलाई थाहा भएन । पैसा उहाहरुको हो । त्यो उहाहरुको कुरा हो ।
अब फिल्मको गुणस्तरको कुरा गरौ न । फिल्म कस्तो छ अभिनयको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले ?
क्वलिटिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाको अधिकांश हलमा जुन क्यमेरा ले खिच्छौ त्यो क्यामेराको क्वलिटि आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ स्पष्ट कुरा भन्दैछु म तपाईलाई र अर्को कुरा रेडले खिचेको हो त्यसपछि फेशन शोको स्टोरी उठाको छु । साथसाथै मेरो फिल्म एकदमै ठुलो बजेटमा बनेको राम्रो फिल्म छ भनेर म भन्दिन नर्मल बजेटमा ३० देखि ३५ लाखमा बनेको फिल्म हो यो ।
हजुर अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ।
हजुर अब फाल्गुन १६ बाट रिलिज हुदैछ । बिग सिनेमासहित सबै हलहरुमा यो फिल्म लाग्दैछ । नेपाली फिल्म हेरिदिनोस, नहेरीकन कमेन्ट नगनरिदिनोस ।